कला-साहित्य | Matrisandesh | Page 5
रमेश प्रसाईले पब्लिक स्पीकरको विजेतासंगै पाए ३ लाख नगद
काठमाडौं । धरानका रमेश प्रसाई एपी वानबाट प्रसारित पब्लिक स्पिकरका विजेता बन्न सफल भएका छन् ।
रमेशले फाइनलमा देशका अन्य ५ प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्दै विजेता बन्न सफल भएका हुन्…
अनसनरत डा. केसींलाई पत्र तत्काल अनसन त्याग्नुस् ।
डा.गोविन्द केसीज्यू ।
तपाईंका मागमा सहमत नेपाली धेरै छन् । म पनि तपाईंका कतिपय मागमा सहमति राख्छु । तथापि संसदले निर्णय गरेको छ । जनताले भोट दिएर बनाएको संसदको निर्णयमा…
समीक्षा अधिकारीको गीत “वनमा काफल पाक्यो” सार्वजनिक
काठमाडौँ। भाइरल गायिका समीक्षा अधिकारीको गीत “वनमा काफल पाक्यो” सार्वजनिक भएको छ ।
चलचित्र नाई “नभन्नु ल ५” को “बालापनको उमेर” बोलको गीत गाएपछि समीक्षा चर्चामा आएकी हुन् ।…
थारु समुदायले मनाए माघी, १६ विगाहा जग्गा दान गर्ने चौधरी सम्मानित
वीरगञ्ज । पर्साका थारु समुदायले माघी पर्वलाई अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनको रुपमा मनाएका छन् ।
थारु समुदायका अगुवा नन्द किशोर पञ्जियारले थारु समुदायले वर्षौदेखि उठाउँदै आएका सवालहरुको सम्बोधन नभएकोले…
मिस धिमाल २०१९ को अडिशन सम्पन्न,२५ जनालाई तालिम
उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारी स्थित धिमाल जातीय विकास केन्द्रको भातृ संगठन धिमाल विध्यार्थी मञ्चको आयोजनामा हुनगागेको मिस धिमाल २०१९ अडिशन सम्पन्न भएको छ ।
पहिलो र दोश्रो अडिशन…
‘मिस तामाङ २०१९’ को पहिलो चरणको अडिसन सम्पन्न
काठमाडौं । ‘मिस तामाङ २०१९’ को पहिलो चरणको अडिसन सकिएको छ । एभरेष्ट फेसन होम र साधना कला केन्द्रको आयोजनामा बाह्रौ सस्करणको मिस तामाङ प्रतियोगिताको आवेदन गत पुस १५…
ट्यारोट कार्ड रिडर क्षमता ढकाल सम्मानित
काठमाडौं । युकेमा एकमात्र ट्यारोट कार्ड रिडर नेपालकी छोरी क्षमता ढकाल नेपाल अभियन्ता अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ ।
युकेमा बस्दै आउनु भएकी एक प्रतिभावान महिला ढकाललाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा…
जापानमा नेपाली कविता प्रतियोगीता सम्पन्न ,कविता एकबिटो सपना प्रथम
टोकियो । पूर्वी नेपाल विकास सहकार्य केन्द्र जापानको आयाजनामा नेपाली साहित्य र श्रृजनामा सक्रिय श्रष्टाहरुलाई थप हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित “नेपाली कविता प्रतियोगीता” जापानको टोकियोमा सम्पन्न भएको छ…
फोनिज अध्यक्ष गुरुङद्वारा लिखित पुस्तक ‘निरन्तर नेतृत्व’को प्रधानमन्त्री ओलीवाट विमोचन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज केन्द्रिय अभ्यक्ष डण्ड गुरुङद्वारा लिखित पुस्तक ‘निरन्तर नेतृत्व’को विमोचन गर्नु भएको छ ।
आईतवार काठमाडौंको टुँडिखेलमा…
इन्टरनेटमा बताउन थाल्यो !
माया गर्छु भन्दै सधै इन्टरनेटमा बताउन थाल्यो !
रिप्लाइ मैले नदिएपछि घरिघरी सताउन थाल्यो !!
खै त्यसपछि त कुरै छोडम म आफैलाइ के के भयो !
उसको मेसेज नदेख्दा नी मन सारै…
गायिका निलिमा साम्पाङ राईको गीति एल्बम ‘आसेप्माङ्’ विमोचन
इजरायल । गायिका निलिमा साम्पाङ राईको लिम्बु भाषाको गीति एल्बम “आसेप्माङ् ” ईजरायलको याद खरूचिम १५, स्थित हलमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ इजरायलले आयोजना गरेको चासोक तङनाम कार्यक्रमको अवसरमा विमोचन…
बडिविल्डिङमा स्वर्ण विजेता महेश्वरले रुँदै भने सरकारबाट सहयोग पाइनँ
अमेरिका । विश्व शारीरिक सुगठन तथा फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनशिपमा स्वर्णपदक जितेर महेश्वर महर्जनले नेपाल र नेपालीको नाम विश्वभर फैलाए । यो उनका लागि मात्र होइन, सारा नेपालीका लागि खुसीको…
गायक तेजस रेग्मी र गायिका खिमा रोका मगरको…
१६ देखि ४५ बर्ष उमेर समुहका ‘मोटी युवती –२०१९’ सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने
काठमाडौँ । राजधानीमा ओमनियाको प्रस्तुति तथा मोडेल सङ्स नेपाल प्रा.लि.को आयोजनामा ‘सुपर प्लस साईज मोडल नेपाल–२०१९’ सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
ओमनियाकी प्रबन्ध निर्देशक प्रियंका बोथ्राका अनुसार यस प्रतियोगितामा…
मिस वर्ल्ड २०१८ को भोटिङमा अग्रपंक्तिमैं शृंखला खतिवडा,नमस्ते नेपाल सिकाउदैं
काठमाडौं । मिस वर्ल्ड २०१८ को भोटिङमा नेपालकी शृंखला खतिवडा अग्रपंक्तिमा मा रहेकी छिन ।
‘नमस्ते नेपाल १ सन्चै हुनुहुन्छ ?मिस वर्ल्ड २०१८ का लागि चीनको सान्यामा…
कांग्रेसले नेता बीपी कोइरालाको मर्म बुझ्न सकेन : पौडेल
यातायात व्यवसायीहरूले धमाधम रजिष्टार कम्पनीमा दर्ता हुँदै